IN Sii socoshada Notre-Dame de Paris oo lagu burburiyay dab-bakhti (videos) - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »CONTINUOUS Notre-Dame de Paris oo lagu burburiyay dab-burbur (videos)
Dab ayaa ka kacay kaniisadda Notre-Dame ee Paris, wuxuu yiri afhayeenka Notre-Dame. Sawirro badan iyo fiidiyowyo daruur qiiq ah ayaa lagu soo daabacay shabakadaha bulshada. Sida laga soo xigtay dab-demiyayaashii ay soo xigatay warbaahinta, dabku wuxuu ka dhacay qiiqa cathedral.
Dab weyn oo 15h18 qarxay Monday 50 April ee-Notre Dame de Paris, ayaa ku dhawaaqay afhayeenka of Our Lady soo xigtay warbaahinta.
Sawirro iyo fiidiyowyo badan oo qiiqa ka soo baxaya dhismaha ayaa lagu dhajiyay shabakadaha bulshada.
Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan dhibbanayaasha suurtogalka ah.
Sida laga soo xigtay warbaahinta, oo loola jeedo dab-demiyeyaasha, dabku waa "loola jeedaa" si loo cusboonaysiiyo taariikhi taariikhiga ah, ee ugu badan Europe. Dib-u-cusboonaynta Notre-Dame's, oo leh aragtida dib u soo celinta, ayaa socday.
Habka muhiimka ah ee wax-ka-qabashada ayaa loo abaabulaa si loola dagaallamo dabka, xusuusnow dab-damiyayaasha.
Dabku wuxuu imanayaa maalinta koowaad ee dabaaldegga Toddobaadka Quduuska ah ee u horseedaya Easter, fasaxa ugu wayn ee Masiixiga.
Dab-demiyeyaasha Paris ayaa ku baaqay in lacag la'aan ay helaan iyaga si ay u soo faragaliyaan
Dabku ma uusan taabanayn qalabkii cathedral, ayaa ku dhawaaqay afhayeenka Notre-Dame André Finot
Dhamaan fiilooyinka Ile de la Cité waa la xidhay
Boulevard du Palais waxaa lagu xiraa baabuurta iyo lugta, iyo sidoo kale buundooyinka ku hareereysan iyo farqiga u dhexeeya Notre Dame, oo hore u muujiyay Le Parisien.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa soo saartey sawirada sahayda gargaarka ee la geeyay goobta.
Dabku wuxuu ku faafi lahaa mid ka mid ah munaaradaha Notre-Dame
Sida laga soo xigtay Reuters, olol ayaa lagu arkay mid ka mid ah labada muraayad ee cathedral.
UNESCO waxay si dhow ula socotaa horumarinta dabka ee Notre-Dame, ayuu yiri Agaasimaha Guud ee UNESCO
Qaar ka mid ah dab-demiyeyaasha 400 ayaa la abaabulay si ay ula dagaallamaan ololaha ku yaal Notre-Dame, sida laga soo xigtay Gudaha
Wax dhaawac ah lama soo sheegin xilligii dabka ka kacayey ee Notre-Dame de Paris, ayaa ku dhawaaqay Xoghayaha Dawladda Laurent Nuñez
Ile de la Cité halka kaniisada gubanaysa laga daadgureeyay, sida laga soo xigtay Reuters
Sida laga soo xigtay Le Parisien, tani waxay si gaar ah u tahay xaalad degdeg ah ee hoteelka-Dieu, oo u dhow kaniisadda.
Xeer ilaaliyaha Paris ayaa baaritaan ku furay dabka
Xeer-ilaaliyaha guud ee Paris, Rémy Heitz, ayaa sheegay in hogaanka PJ la qabtay.
Saqafka iyo saacadda cathedral ayaa burburay, ayaa wargeyska Sputnik u sheegay wargayska
Falaagada, saacadda, saqafka faleebo ee Notre-Dame de Paris burburiyay (videos)
Dab-damis ah ayaa cuna qabateynaya Notre Dame Cathedral oo ku yaal caasimadda Faransiiska. Falaagada ayaa burburay, ayaa sheegay in kaaliyaha u qaabilay duqa magaalada Paris. Saqafka iyo saacadda ayaa la socda.
Emmanuel Macron wuxuu tagaa Notre-Dame de Paris
M.Macron waxa uu ka tagay Elysee oo ku yaal 20X15 xagga hore ee cathedral, halkaasoo uu ku weheliyo ra'iisal wasaaraha iyo madaxweynaha Golaha Qaranka Richard Ferrand, sida ay AFP u sheegtay.
Madaxweynuhu wuxuu ku soo warramay Twitter-ka "dareenka qaran oo dhan".
Donald Trump ayaa kula taliyay Twitter in ay isticmaalaan bambooyin biyo ah si ay ula dagaallamaan ololka
"Waa wax aad u xun in la daawado dabka weyn ee Notre-Dame Cathedral ee Paris. Waxaa laga yaabaa in aan isticmaali karno bambooyin biyo ah si aan u deminno ololka. Waa inaan si dhaqso ah wax uga qabannaa "ayuu yiri Mr. Trump.
Duufaankii cathedral ayaa burburay
Bilayska ayaa qayb ahaan ka mamnuucay gelitaanka Ile de la Cité, sida uu sheegay wargayska Sputnik.
Dhammaan qaabka "waa gubasho," ayuu yiri afhayeenka Notre-Dame
"Khatarta burburinta isgoysyada Notre-Dame de Paris waa mid muhiim ah," ayuu yiri Emmanuel Grégoire, duqqa-xigeenka 1er ee Paris
Emmanuel Grégoire, oo ah kuxigeenka kuxigeenka ee magaalada Paris, ayaa sheegay in BFM Paris in mudnaanta koowaad ay tahay "si looga hortago khatarta ka iman karta burburka dammaanadda ee dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha".
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Laurent Nuñez ayaa booqday goobta
Emmanuel Macron ayaa hadalka telefishanka la dhigay ka dib markii la sii daayay sababtoo ah dabka socda ee Notre-Dame, sida laga soo xigtay Elysée
"Sababtoo ah dabkii foosha xumaa ee Notre-Dame-de-Paris, Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa go'aansaday inuu dib u dhigo hadalka," ayuu yiri Elysee boggeeda internetka.
Kadib laba bilood ka dib calaamadihii isweydaarsiga ahaa ee Debeda Qaran ee Weyn, Emmanuel Macron wuxuu ahaa inuu ku dhawaaqo Isniinta 15 April ee 20h "mashaariicda mudnaanta leh iyo talaabooyinka ugu horreeya ee la taaban karo"
Goobta booliiska ayaa loogu yeeray marin sahlan ee baabuurta xaaladaha deg-degga ah iyo faragelinta booliska
Duqa magaalada Anne Hidalgo ayaa cambaareeyay "dab la qabadsiiyay" ee Notre-Dame
Hidalgo ayaa sidoo kale sheegay in dab-demiyayaashu ay xakameynayaan ololaha.
"Dab-damis muhiim ah oo aan ku socono Notre Dame, waa in aan joognaa, ka baxno aagga, oo u oggolaanaa in gargaarku soo faragaliyo," ayuu yiri Ku-xigeenka Duqa ee Duqa Magaalada Paris on Twitter.